‘Nganika abakwaGupta ubuzwe ngenxa yeqhaza labo emnothweni’ | News24
Johannesburg – UNgqongqoshe wezeziMali, uMalusi Gigaba, wanikeza abakwaGupta ubuzwe baseNingizimu Afrika ngonyaka odlule ngenxa yeqhaza labo emnothweni waseNingizimu Afrika, kubika iThe Huffington Post SA.
Empendulweni eyayibhalwe phansi kaHaniff Hoosen weDemocratic Alliance ngonyaka odlule, uGigaba, owayesenguNgqongqoshe wezezaseKhaya, wathi umthetho iCitizenship Act uyakubeka ukuthi angase, ngaphansi kwezimo ezingajwayelekile, anikeze isitifiketi sokwenza ube umhlali waseNingizimu Afrika kulowo osuke efake isicelo kodwa engahlangabezani nemigomo ebekiwe.
OLUNYE UDABA: #GuptaLeaks: Okwathunyelwa i-CV yakhe kwabakwaGupta wagixabezwa ngesikhundla kwa-Eskom
“Iqiniso lokuthi uMnumzane uGupta kanye nomndeni babamba iqhaza emnothweni waseNingizimu Afrika kwanikeza izizathu eziqinile zokucutshungulwa kwesicelo sabo ukuze banikezwe ubuzwe ngaphansi kwezimo ezingajwayelekile,” kusho uGigaba.
I-The Huffington Post SA ibika ukuthi abakwaGupta kusolakala ukuthi nabo baphinde bafaka amaphepha asekelayo nalapho babekhombisa ukuthi banezisebenzi eziqashwe ngokugcwele ezilinganiselwa ku-7 000 esiqashwe yi-Oakbay, okuyinkampani ephethe izinkampani ezehlukene zabo.
Iqhuba ithi uGigaba wabuzwa ukuthi yimiphi imininingwane egcwele yalezi zimo ezingajwayelekile anika ngaphansi kwazo ubuzwe abakwaGupta.
UGigaba wathi uma ngabe lowo ofake isicelo sobuzwe sinqatshiwe isicelo sakhe, angaya kuNgqongqoshe bese afake amaphepha anento ebambekayo ancoma ukuthi kungani kumele anikwe ubuzwe njengoba lokhu kuvumelekile ngaphansi kwezimo ezingajwayelekile. UGigaba uthi iyona kanye-ke into abakwaGupta abayenza.
UGigaba wabalula isidingo sokuthi abakwaGupta bamele inkampani yabo i-Oakbay Investments, nathi ngaphansi kwayo inezinkampani emikhakheni eyehlukene, okubalwa ezobuchwepheshe, izimayini kanye nezinkampani zezindaba, kubika iThe Huffington Post SA.